Windows အသုံးပြုသူသည် GNU / Linux နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ | Linux မှ
Windows အသုံးပြုသူသည် GNU / Linux နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာများ GNU / Linux များ ငါတို့aroundဝံဂေလိတရားကိုလှည့်ပတ်သွားပါ operating system ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပါက၊ အကယ်၍ ဖွင့်လျှင်၊
ဒါကအသုံးပြုသူတစ် ဦး ပဲ Windows ကို သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် OS မှ? တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါစဉ်းစားသောအရာအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်၊ အသစ်ရောက်လာတဲ့အသုံးပြုသူအားလုံးကိုလေ့လာသင့်သည် GNU / Linux များ.
1 GNU / Linux ဆိုတာဘာလဲ။
3 ဖိုင်စနစ်နှင့် Partitions ကို
4 ဂိတ်? ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ် !!!
5 မှတ်တမ်းများသူတို့ဘာတွေလဲ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ
6 Desktop Environment တစ်ခုထက်ပိုပြီး
7 သိုလှောင်ရုံများနှင့်မှီခိုမှုများ: ကျွန်ုပ်ရှိသည် .EXE မေမေကိုကြည့်ပါ
8 ကျွန်ုပ်၏ setting များဘယ်မှာလဲ။
9 ၀ င်းဒိုးလိုငါလုပ်လို့ရလား
10 သင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟုတ်ပါ (မလိုချင်လျှင်။ )
12 Install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာအားလုံးမြင်ရလိမ့်မယ်။
GNU / Linux ဆိုတာဘာလဲ။
ငါတို့သူငယ်ချင်းပြီးပြီ Perseus ရေးသားခဲ့သည် အကောင်းဆုံးဆောင်းပါး ယေဘုယျအားဖြင့်ကားအဘယ်သို့မိန့် GNU / Linux များ။ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ "ငါ Linux သုံးတယ်"တကယ်တော့ဖြစ်သင့်တယ်၊ "ငါ GNU / Linux ကိုသုံးတယ်"။ မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည် kernel (Linux) နှင့်စီမံကိန်း၏များစွာသောအခြား applications များ ကို GNU။ ဘယ်သူမှမသုံးပါဘူး Linux ကို (Kernel)
၏ဖြန့်ဝေ GNU / Linux များ အရသာအားလုံးနှင့်အရသာအားလုံးအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်ကူဆုံးတပ်ဆင်မှုနှင့်တပ်ဆင်မှုအရကြည့်နိုင်သည် (Ubuntu၊ LinuxMint၊ openSUSE၊ Debian) ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအချို့ (Archlinux၊ Chakra၊ Slitaz) တောင်မှအများဆုံးရှုပ်ထွေး (Gentoo, ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း).
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော Hardware ပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ငါတို့သုံးတာပေါ့
ဖိုင်စနစ်နှင့် Partitions ကို
ငါအသုံးပြုတဲ့အခါအများဆုံးဝေဖန်အချက်ထင်ပါတယ် GNU / Linux များ ၎င်းသည် disk များကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖိုင်ထားသိုစနစ်. Perseus နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တယ် ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ် ဦး တောက်ပဆောင်းပါးသို့သော် Windows အသုံးပြုသူသည်ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းကိုသိထားရမည်ဟုအကျဉ်းချုံးနိုင်သည် GNU / Linux များ ၃ ပိုင်းခွဲထားသည်။
<° - များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး partition ကို အမြစ် (/) ဒီဟာက C နဲ့ညီတယ်။
<° - များအတွက်ဒုတိယ partition ကို အိမ် (/ အိမ်) ဒီဟာက D: နှင့်ညီသည်။
<° - များအတွက်တတိယ partition ကို လဲလှယ်ရေး အရာကို virtual မှတ်ဉာဏ်နှင့်ညီမျှသည်။
သင်လည်းသိသင့်တယ် ဤအ partitions ကိုအဘို့ မသုံးဘူး NTFS o Fat32 (ဤအမျိုးအစားအခန်းကန့်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း)။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Ext2, Ext3 နှင့် Ext4, သူတို့ကကျနော်တို့ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖို့တရားဝင်သည်။
ဂိတ်? ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ် !!!
အသုံးပြုသူအမြောက်အများသည် terminal ကိုကြောက်ရွံ့ကြသော်လည်း၎င်းသည်ကိုက်မထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပြီး၎င်းသည်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တစ် ဦး ဖြန့်ဖြူး GNU / Linux များ မပါဘဲ Terminal Emulator။ သင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့မရှိလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ
"ယေဘုယျအားဖြင့်" terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှကိုဂရပ်ဖစ် application များသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမှားများကို debug သို့မဟုတ် System မှသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုမစတင်လိုပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းမှပြန်လာသောအမှားကိုမြင်ရန် terminal မှ၎င်းကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြားခြားနားချက်များတစ်ခုမှာ GNU / Linux များ y Windows ကိုစာရင်းကိုအမြဲတမ်းစာရင်းပြုစုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည် operating system။ ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာဘာလဲ။ ကောင်းပြီရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့စနစ်သည်မတူကွဲပြားသည့်အခါများ၌ဘာလုပ်နေသည်ကိုသိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ပို၍ ကောင်းသည်၊ အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကောင်းပြီ စနစ်မှတ်တမ်းများ.
မှတ်တမ်းများကိုလေ့လာသောအခါကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများ၏ ၉၀% ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ သစ်လုံးများသည် အသုံးချပရိုဂရမ်များ (သို့) စနစ်ဖြင့်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုပြတဲ့မှတ်တမ်းသို့မဟုတ်သမိုင်းတစ်မျိုး နှုန်း se ။
ကွန်ယက်ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုကိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပမာ၎င်းကိုဖြုတ်ခြင်း၏ရိုးရှင်းသည့်အချက်ကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ငါတို့ရဲ့အစ operating system ၎င်းသည်မှတ်တမ်းတစ်ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး application များစွာသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမှတ်တမ်းများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤဖိုင်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်လမ်းညွှန်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည် / var / log ပြaနာတခုခုရှိရင်အဲဒီမှာသူတို့ကိုတိုင်ပင်နိုင်တယ်။
Desktop Environment တစ်ခုထက်ပိုပြီး
မတူဘဲ Windows ကိုတွင် GNU / Linux များ ကျွန်တော်တစ် ဦး ထက်ပိုသုံးနိုင်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ပင်သူတို့ကိုတခုထိခိုက်မပါဘဲ installed ရှိသည်။ သို့သော်ထိုသို့ရှင်းလင်းရန်ကောင်းလှ၏ GNU / Linux နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ Desktop မလိုအပ်ပါ။
El Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘာမှရှိပါတယ် operating system။ ပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန် "ဂရပ်ဖစ်" နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခုaDesktop ပတ် ၀ န်းကျင် ကတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် ဂရပ်ဖစ်ဆာဗာယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်သော Xorg.
အခြားအရာများအကြားရရှိနိုင်သည့် Hardware နှင့်အရံပစ္စည်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသော Kernel ကိုစတင်ပါ (Mouse, Keyboard ... etc)။ ဤသည်အပေါ်စတိုးဆိုင်များပါဝငျသညျ။
ထိုအခါန်ဆောင်မှုများစတင်ပါ (ဥပမာ - ဒေတာဘေ့စ်ဆာဗာ၊ application daemons နှင့်အခြား).
နောက်ပိုင်းတွင် ဂရပ်ဖစ်ဆာဗာ။ ဒီဆာဗာမရှိရင်တော့ windows သို့မဟုတ် menus တွေကို monitor ပေါ်မှမမြင်နိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့စတင်သည် Session မန်နေဂျာ (optional ကို startx သုံးလျှင်) ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ် graphical ပတ်ဝန်းကျင် အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်သောအခါထည့်သွင်းထားသောအချက်အလက်များ။
El operating system နှင့် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သူတို့ဟာဆက်စပ်မှုရှိပေမယ့်သူတို့ဟာသီးခြားအရာတွေပါ။ ထို့ကြောင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကထိုကြောင့်ဖြစ်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကိုမထိခိုက်ပါဘူး kernel ရုံပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့် ဂရပ်ဖစ်ဆာဗာ (အချို့ကိစ္စများတွင်) ငါတို့အဲဒါကိုပြင်လို့ရတယ်
သိုလှောင်ရုံများနှင့်မှီခိုမှုများ: ကျွန်ုပ်ရှိသည် .EXE မေမေကိုကြည့်ပါ
En GNU / Linux များ အဲဒါကိုအသုံးပြုဖို့အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ် အထုပ် repositories က ဆာဗာပေါ်တွင်စုစည်းထားခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းစသည့်ဆော့ဝဲလ်များသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ application များကို install လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဤနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထိတ်လန့်စရာကောင်းသနည်း။ Windows အသုံးပြုသူများသည် binaries (.exe) ကိုတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ဆော့ဖ်ဝဲအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် GNU / Linux များ ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီးဘာမှဖြစ်မလာသေးသောအထုပ်များရှိပါသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အများစုသည်အခြားအစုများလိုအပ်သည် (စာအုပ်ဆိုင်များနှင့်ကဲ့သို့သောအရာများ) အရာက၎င်း၏မှီခိုဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဥပမာအားဖြင့်လိုလားလျှင်၊ LibreOffice အတွက် Windows ကို, သင်သာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည် ။exe နှင့် voila, ဒါပေမယ့်သင်ကချင်လျှင် debianငါဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် သဲကန္တာရ ပြည့်ဝ၏ debသိုမဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏မှီခိုမှုနှင့်အတူ repository မှကူးယူပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်၊
En GNU / Linux များ သင့်တွင် .exe နှင့်တူသော binaries များရှိသည်၊ ၎င်း binaries များကိုရိုးရှင်းသောနှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင် install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒီနေရာမှာဒီ binaries တွေကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာကိုဥပမာများစွာပြပါမယ်။
အပြာရောင်deb - အပေါ်အခြေခံပြီးဖြန့်ဝေသည် debian (Ubuntu, LinuxMint, Dreamlinux ... စသည်တို့)
အပြာရောင်.rpm - RedHat သို့မဟုတ်ယင်း၏အထုပ်စနစ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် (Fedora, openSUSE ... etc)
အပြာရောင်.pkg.tar.xz - အပေါ်အခြေခံပြီးဖြန့်ဝေသည် Archlinux (Chakra, ArchBang ... စသည်)
အပြာရောင်.tar.gz ဒါမှမဟုတ် bluefish.tar.bz2 - ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ setting များဘယ်မှာလဲ။
mail client သို့မဟုတ် browser ကိုကျွန်ုပ်တို့ configure လုပ်သောအခါအသုံးပြုသူ၏ configurations အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထဲတွင်သိမ်းဆည်းသည် / နေအိမ် (disk D နှင့်ညီမျှသည်။ :) သို့မဟုတ်အချို့ကငါတို့ခေါ်သကဲ့သို့ငါတို့ ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွဲ။ ၀ င်းဒိုးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဤအမျိုးအစားကို Disk C တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ (စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ချိန်ညှိချက်များ .. ).
Setting ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွဲများတွင်သိမ်းဆည်းထားသည် / နေအိမ် သူတို့ကများသောအားဖြင့်လျှောက်လွှာပြီးနောက်အမည်ရှိနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ၏ setting များကို Thunderbird ကိုလက်ခံရရှိသည့်အီးမေးလ်များ၊ ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းများနှင့်အခြားသူများကိုသိမ်းဆည်းထားသည် /home/usuario/.thunderbird.
၎င်းသည်အားသာချက်များစွာရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့၏ OS ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက root အခန်းကန့်ကိုသာ format ချပြီးဖြစ်သည် / နေအိမ် နဂိုအတိုင်း၊ ငါတို့ပြီးသွားတဲ့အခါငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုနဂိုအတိုင်းထားလိမ့်မယ်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည် ဤဆောင်ပါး.
အဖြေဖြစ်ပါသည် SI နှင့်ပင်အများကြီးပို။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်လေ့ရှိသောတူသောအလုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ Browse, Chat, စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရေးရန်၊ Play၊ သီချင်းနားထောင်ပါ၊ ဗီဒီယိုကြည့်မည်၊ ပုံများတည်းဖြတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
၎င်းတို့သည်အရာရာတိုင်းအတွက်တူညီသောကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများဖြစ်သည်။ [Ctrl] + [C] ကူးယူရန်, [Ctrl] + [V] ကူးယူရန် ... စသည်တို့ အားလုံး GNU / Linux များ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းမှသည် desktop မျက်နှာပြင်အထိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
သင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟုတ်ပါ (မလိုချင်လျှင်။ )
Windows XP အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း: မေ့လျော့ !!! ၎င်းသည်မလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်မတူပါ။ သုံးစွဲသူများသည်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်ကန့်သတ်ချက်များရှိသောအကောင့်များရှိသည် (Ubuntu …။ ကောင်းစွာ .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ distro အရသိရသည်။ ) ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စနစ်အတွင်းရှိတစ်ခုခုအားသင်စီမံခန့်ခွဲမှုခွင့်ပြုချက်များပါသောအထောက်အထားများလိုအပ်သည်။
မကောင်းသော EULAs မေ့လျော့။ သင်သည်သင်၏ iso ယူနိုင်ပါတယ် Ubuntu ကို သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်စက်ကိရိယာမဆို၎င်းကိုထုတ်ချေးပါ၊ ထုတ်ပေးပါ၊ သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သောစက်အားလုံးတွင်တူညီသောမိတ္တူကိုထည့်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်တပ်ဆင်ရန်မလိုပါကသင်သည် LiveCD သို့မဟုတ် Flash Memory နှင့်သာလျှင် load ရမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင့် Motherboard သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် hardware အတွက်မဆို drive driver အကြောင်းသင်မေ့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် install လုပ်ပြီးစတင်သုံးစွဲသည်။ GNU / Linux များ သင်၏ PC hardware ကိုအံ့သြလောက်အောင်စီမံသည် (လာမည့်အချက်၌အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်မဟုတ်လျှင်).
ပေမဲ့ GNU / Linux များ သူ့မှာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အရမ်းဆိုးတယ်။ ၎င်းသည်စနစ်၏အမှားမဟုတ်ပါ၊ ဤရှုထောင့်တွင်ကုမ္ပဏီအချို့၏သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးစီးပွားများကိုကျွန်ုပ်တို့အနှစ်ချုပ်နိုင်သည့်အချက်များများစွာရှိသည်။ ပိုက်ဆံ, မိုနိုပိုလီနှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် Hardware အချို့နှင့်ပြproblemsနာများတွေ့ကြုံရနိုင်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများအတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖြေတစ်ခုကိုအမြဲရှာတွေ့နိုင်သည်။
သင်ယူမှုကန့်လွန်းမှုသည်အလွန်နိမ့်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမမြင့်မားပါ။ အထောက်အကူပြုဖိုရမ်များ၊ IRC လိုင်းများ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ ဆိုဒ်များနှင့်ပိုများသည်။ ကူညီရန်ဆန္ဒရှိသောအသုံးပြုသူများစွာရှိသည်။
ငါသိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထင်ပါတယ် GNU / Linux များ သူတို့၏ကမ္ဘာထဲသို့ဝင်သည်။ အခုငါပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုမင်းအချိန်ပိုယူတတ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို (၅) နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသေဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးထွားလာသည်။ အပြောင်းအလဲကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်၊ အသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားလေ့လာရန်နှင့်၎င်းတို့မှသင်ယူရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
strong / li ၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ။ အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Windows အသုံးပြုသူသည် GNU / Linux နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ
Wooow, မင်းဟာ linux ပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါမကြာသေးခင်ကတစ်နှစ်ခွဲပဲရှိသေးတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀ကောင်းပြီ၊ ငါပင်ဂွင်းနှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေခဲ့ been
တစ်နှစ်ခွဲခွဲ Slackware နှင့်? ငါ3ရှိကြောင်း fuck ဆိုတဲ့ငါ Slackware မှတဆင့်တယ်
Slackware သည်ကျွန်ုပ် install လုပ်သောပထမဆုံး distros တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကုသမှုတစ်ခုလည်းခံခဲ့ရသည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်သူငယ်ချင်း O_O 'ခင်ဗျားကအသံပြာရင်ဘတ် XD ထဲမှာဘာတွေဖြန့်ချိတယ်ဆိုတာမ ၀ င်ဘူး၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် behind နောက်မှာမနေပါဘူး
ငါကြိုးစားခဲ့သည့်ပထမဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုမှာ Mandrake 8.1 (ယနေ့ Mandriva) ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် 2001 Mh Pentium နှင့် RAM 133 Mb တို့ပေါ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအရာအားလုံးကိုမင်းအားသင်ပြုခဲ့သည့်နည်းအတိုင်းကျွန်ုပ်အားရှင်းပြပြီးအကျဉ်းချုံးစေခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်များစွာ၏ရေငုပ်ခြင်းများကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်းထိုအချိန်တွင် hardware support နှင့် application အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုကျွန်တော်သဘောကျခဲ့သည်။ လိုအပ်ချက်ကြောင့်ငါ့ကိုခဏ XP အသုံးပြုရန်အတင်းဖိအားပေးသော်လည်းစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုနှင့် partition ကိုအမြဲတမ်းထားခဲ့သည်။
သင်၏ဆောင်းပါးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားစနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းကိုဖတ်ပြီးနောက် linux သို့ပြောင်းမည်။
133 Mhz နဲ့ 32 Mb RAM ပါတဲ့ Oentio Pentium? အလို။ ကျွန်ုပ်၏ linux ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာပြန်လည်လည်ပတ်စေချင်ပါသည်
အမြဲတမ်းအလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ linux ကိုအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမှတ်မိရန်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။ လူများကိုလူအများအားစွဲလမ်းစေသည့်အချက်များကားဒရိုင်ဘာ၏ပြdistrနာဖြစ်သည်။ distros အများစုသည်သင်၏ hardware အားလုံးကိုချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဖော်ပြရန်အကောင်းဆုံးအချက်မှာအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အကြောင်းအရာကိုလုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မတွေ့ပါကသို့မဟုတ် ဦး စားပေးမှုမဟုတ်ပါကဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Chakra ကို "ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော" အပိုင်း၌ကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းပါ။ Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva, Mint သို့မဟုတ် Fedora ကဲ့သို့သောတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်မှာအမှန်ပင်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာငါ installation ကို, ဒါပေမယ့် configuration ကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် .. 😀
ပြunderstandနာကကျွန်တော်နားလည်သည့်အတိုင်း Chakra installer (အထူးသဖြင့် partitioning and HDDs section) သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရိုးရှင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ အဲဒါမမှန်ဘူး၊ မသိဘူး၊ ငါဖတ်တဲ့အရာပဲ🙂
partitions ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရိုးရှင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၎င်းသည် ubuntu ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ သင် partition လုပ်လိုသောအခါပြproblemနာဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်မျိုးနွယ်စုတွင် partitioner မရှိသေးသောကြောင့် kpartition manager ၏ crap ဖွင့်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာမိုင်ကွာဝေး gparted ကဲ့သို့ဖြစ်တကယ်တော့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်မ partitions ကအရူး LOL တတ်၏
အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ GNU / Linux ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုသူကိုပထမဆုံးပြောတာကအသံထွက်ဖို့ပဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ren ^^
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်အရမ်း ၀ မ်းသာပါတယ်
သင့်အနေဖြင့်ဤအပိုင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော Ubuntu ပျောက်နေသည်
ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တစ်ခုခုလိုချင်ရင်သူတို့ fuck ဆိုတဲ့ကိုမလေ့လာချင်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခုခုကုန်ကျမှာပါ
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်, ငါOgareñoအသုံးပြုရန်အဘို့အကြှနျုပျ၏လက်ပ်တော့နှင့်အတူ3လသာရှိခဲ့သည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောအစီရင်ခံစာ Elav၊ မင်း feeling ခံစားမှုပင်ပေးသည်
ကောင်းမွန်သော post, Elav ။
စကားမစပ်ငါနောက်ဆုံး Chakra ကို download လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကကြိုးစားချင်ရင် download နှောင့်နှေးမှုကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုကျော်ပြီးကူးယူလိုက်ရုံပါပဲ။
ပြနာက Chakra က KDE ကိုသုံးတယ်၊ ငါဒီ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ငါနောက်တစ်ခေါက်ထားတော့မယ်။ သို့သော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
wilber rivas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Linux ကိုကျွန်တော် dabble လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် windows imperialism ကိုပြန်သွားတယ်။ ငါ ၀ င်ပြီးကြိုးစားတိုင်းအချိန်တိုင်းအေးခဲသွားလိမ့်မည်၊ ထိုအမှားနှင့်ငါ့ကိုသင်ကူညီနိုင်မည်လား ......... အိုငါငလျင်လှုပ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီကိုများစွာကျေးဇူးတင်မည်။
wilber rivas အားပြန်ကြားပါ
Ubuntu 10.04 (သို့) LinuxMint 12 ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဝမ်းနည်းပါတယ်က ubuntu 11.10 နှင့်အတူရှိ၏
ပထမတစ်ခုကနောက်ထပ် operating system ဆိုတာဘာလဲ။
ဒုတိယအချက် - သင်တင်ပြထားသည်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်သင်ဖတ်ရန်လိုသည်။
ငါ GNU / Linux ကိုသုံးတယ်လို့ပြောပြီးလူအများစုက၎င်းဟာ windows တွေနဲ့အတူတူပဲ၊ သူတို့သုံးတဲ့ပရိုဂရမ်တွေ (tools) တွေကိုသုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
သို့သော် ev ၀ ံဂေလိပြုရန်မှတ်ချက်ပေးရာတွင်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ပြောနေတာကိုသူတို့မဖော်ပြခဲ့ပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်ကကျွန်တော့်ကိုသတင်းအချက်အလက်ကောင်းကောင်းပေးတယ်။ ငါတကယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လက GNU / Linux ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။
Edgar kchaz ဟုသူကပြောသည်
5 နှစ်!! Mamma mía…ငါလတစ်လလောက်ပဲရှိခဲ့ဖူးတယ် !! Wauxo မှလှူဒါန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်«“ linux မှ” မည်မျှလေ့လာသင်ယူနိုင်မည်နည်း
Edgar Kchaz အားပြန်ပြောပါ
Waooo ၅ နှစ်၊ ငါပထမလအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် !! သင်ဤစနစ်နှင့်မည်မျှသင်ယူနိုင်၊ တိုးတက်နိုင်ကြောင်းမယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ Wonderful ... ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ "from linux" is ... အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသော post ကို; မင်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမင်းရေးခဲ့တာကိုမင်းသိတယ်။
ငါ GNU / Linux ကိုအခြေခံပြီး OS တစ်ခုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကတည်းကလပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်အားထိုအဆင့်ကိုပေးသောကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်တွန့်ဆုတ်မှုကိုကျော်လွှားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံကိုနှစ်သက်သည်။ သူကဒီကိစ္စကိုအချိန်အတော်ကြာစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ ပထမတော့ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အတွေးအခေါ်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ ((ဒီလောကမှာအရာရာတိုင်းရဲ့စိတ်စွန်းကွက်မှုကအရာအားလုံးကစိတ်စွန်းကွက်မှု) ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်, သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို (နှင့်ငါ့အဘို့ဖြစ်နေဆဲ!) အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။
ဒီစာမူထဲမှာမှတ်ချက်ပေးထားတဲ့အရာအများစုဟာငါနဲ့ရင်းနှီးတယ် (သတိထားပါ၊ မှတ်တမ်းခေါင်းစဉ်ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုငယ်တခုဖြစ်တယ်)၊ သူတို့ဟာငါ GNU / Linux အကြောင်းလေ့လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအရာများဖြစ်တယ်၊ ဒီဆောင်းပါးဟာလွတ်လပ်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အခမဲ့ OS ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချတဲ့သူအားလုံးအတွက်အလွန်သင့်တော်တယ်လို့ထင်တယ်။
ငါအဆိုးမြင်လိုအသံမဖြစ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် GNU / Linux ကိုအသုံးပြုချင်သူမည်သူမဆို ev ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန်မလိုအပ်ပဲ၊ အခြားသူများက၎င်းကိုမသုံးသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့မင်းတို့တွေအကြောင်းငါမသိပေမယ့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့်ငါစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်၊ ငါလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ငါစိတ်ကူးခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အသုံးပြုရန်ကြာမြင့်စွာမယူခဲ့ပါ။ နေ့စဉ်သုံးစရာမလိုဘဲအစဉ်မပြတ်3နှစ်နှင့်4။ ငါဖြစ်စေအများအပြားအဖြစ်အတွေ့အကြုံမရဖြစ်၏။ များစွာသောဗားရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် debian နှင့် ubuntu အပြင်အခြားဖြန့်ဝေမှုများလည်းရှိသည်။
Juan Pablo Lozano ဟုသူကပြောသည်
Juan Pablo Lozano ကိုပြန်ပြောပါ
GNU / Linux distros များပေါ်တွင်အခြေခံထားသော operating system သည်အခြားသောစနစ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတွင်အောင်မြင်မှု၊ အားသာချက်များနှင့်အလွန်ကောင်းသောအရာများများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်အမှားများ၊ အားနည်းချက်များနှင့်ပြproblemsနာများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကျယ်ပြန့်ဆုံး linux distros များကိုစမ်းသပ်သူနှင့်လေးစားသူဖြစ်ပြီး ၇ နှစ်ခန့်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အခမဲ့ကမ်းလှမ်းထားသောအခမဲ့ဆော့ဝဲများနှင့်အခမဲ့ application များအတွက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသော GNU / Linux distro ၏ developer များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Mageia, Ubuntu, Deeping Linux, Fedora ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးယခုငါ Linux Mint 15 နှင့်အတူရှိနေပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သည်။ သို့သော်အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်သည် Windows7ကိုအသုံးပြုသည်။
ငါဖတ်ရန်မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှအီးမေးလ်ဖြင့်ဤဆောင်းပါး၏ link ကိုငါစေလွှတ်ခဲ့သည်
Janik Ramirez ဟုသူကပြောသည်
Linux kernel ကို Android မှာသုံးသင့်တယ်။ Android လည်း GNU tools တွေသုံးလား။ ငါပြောတာကနေရာတော်တော်များများမှာသူတို့ဟာ Google OS ဟာ "Linux မိသားစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု" ပဲဆိုတာသူတို့ပြောတာပါ။
မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် GNU ကိရိယာများကိုမသုံးပါ။ ပြီးတော့ငါထင်တဲ့ Android ဟာစီးပွားဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတွေပါတဲ့မူရင်း Linux ဗားရှင်းကိုသုံးတယ်။ ၎င်းအစား Gnu / Linux သည်လုံးဝလွတ်လပ်စေရန်ပြုပြင်ထားသော linux kernel ကိုအသုံးပြုသည်။
Windows မှ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှု ၁၀၀ ကျော်ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
Linux သည် Microsoft မိုcloud်းတိမ်သို့တက်သည်